अस्पतालमा लक्षणसहितका संक्रमितहरू बढ्न थाले
विराटनगर, २५ भदौ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा कोरोना संक्रमितमा लक्षणहरू देखिन थालेको छ ।
अस्पतालमा बेड अभाव हुन नदिन गम्भीर लक्षण देखिएका तथा आईसीयू र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने संक्रमितलाई मात्रै अस्पातलमा भर्ना गरिन थालेको छ । लक्षण नदेखिएका बिरामीहरू घरमै होम आइसोलेसन बस्न थालेपछि अस्पतालमा रहेका अधिकांश संक्रमितमा केही न केही लक्षण देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्र विराटनगरमा राखिएका ७० प्रतिशत संक्रमित बिरामीहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको लक्षण देखिएको अस्पतालका सिनियर फिजिसियन डा. दीपक सिग्देल बताउँछन् । अस्पतालमा उपचारत १० जनाको अवस्था सिरियस छ, उनले भने, ‘चारजनालाई आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ भने छजनालाई एचडीओमा राखिएको छ ।
‘हाल कोशी अस्पताल कोभिड–१९ उपचार केन्द्र विराटनगरमा ५६ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । यीमध्ये ७० प्रतिशत संक्रमित बिरामीहरू लक्षणसहित छन्,’ डा. सिग्देल भन्छन्, ‘बिरामीहरूमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, झाडापखाला लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखिएका छन् ।
कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामीहरूको उपचार गरिरहेको विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितहरूमा लक्षण देखिएको प्रशासन प्रमुख सुदीपसिंह राठोर बताउँछन् । प्रशासन प्रमुखका अनुसार, आइसोलेसनमा बसेका १५ जनामा रुघाखोकी, ज्वरो, थकानलगायतका सामान्य समस्याहरूमात्र छन् । साथै, उनीहरूको स्वास्थ्यमा सुधार पनि भइरहेको छ ।
‘भेन्टिलेटरमा हालसम्म कोही पनि राखिएको छैन,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा चारजनालाई आईसीयूमा राखेर उपचार गर्नु परे पनि हालसम्म भेन्टिलेटरको आवश्यक भने परेको छैन ।’ आईसीयूमा राखेर उपचार गराइरहेका बिरामीहरूलाई सुरुमा अस्पताल ल्याउँदा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, झाडापखालाको समस्या रहेको थियो, तर अहिले उनीहरूको छातीमा इन्फेक्सन देखिनुका साथै सास फेर्न समस्या रहेको उनले बताए ।
हाल विराट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको आइसोलेसनमा १९ जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ ।
विरानगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत नारायण दाहालका अनुसार अस्पतालको आइसोलेनमा बसेकाहरूमा सामान्य समस्या देखिए पनि गम्भीर प्रकारको कुनै लक्षण देखिएको छैन । अस्पतालको आइसोलेनमा हाल १३ संक्रमितहरूलाई राखिएको छ, तीमध्ये धेरैजना एसिम्टोम्याटिक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘तत्काल अस्पतालले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीका लागि छुट्टै आइसोलेसन बेड बनाएको छ,’ उनले भने, ‘अब अन्य संक्रमितहरूको लागि पनि आइसोलेन बनाउने क्रम जारी रहेको भए पनि पूरा हुन केही समय लाग्छ ।’ अस्पतालमा अस्पतालमा ३१ जना संक्रमित पुष्टि भएका थिए, जसमध्ये अन्य संक्रमितहरू होम आइसोलेसनमा रहेको दाहालले जनाएका छन् ।